अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा कांग्रेसका सभापति देउवाद्धारा शुभकामना सन्देश व्यक्त - Khabar24Nepal	Khabar24Nepal	अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा कांग्रेसका सभापति देउवाद्धारा शुभकामना सन्देश व्यक्त - Khabar24Nepal
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा कांग्रेसका सभापति देउवाद्धारा शुभकामना सन्देश व्यक्त
वैशाख १९, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना अथवा २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको प्रस्थान विन्दु यही मजदुर आन्दोलन रहेको स्मरण गर्दै देउवाले नेपाली कांग्रेस र मजदूरहरु सधैं एक अर्कामा आवद्ध भएर एक अर्काका अनन्य सहयोगी भएर रहिआएको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०२० को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले मे-१ श्रमिक वर्गले लामो संघर्षपछि आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको एक ऐतिहासिक दिन रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘वि.सं. २००३ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदूरहरुको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो । सरकारले त्यो लामो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दवाउने नीति अख्तियार गरेर— जननायक बी.पी. कोइराला लगायत धेरै नेताहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।’
उहाँले भन्नुभएको छ, ‘अहिले पूरै विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीबाट विश्वब्यापी रुपमै प्रताडित भएको छ । नेपाल पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउनको अवस्थामा रहेकोले सम्पूर्ण नागरिकको जीवन सहज हुन सकेको छैन । यो बेला श्रम गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकहरुको जीवन खाद्यान्न लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा अझ बढी कष्टकर हुन पुगेको छ । श्रमिकको यो कष्टकर जीवनका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । लक डाउनका कारण श्रमिकले कष्टकर स्थिति भोगिरहेका बेला उनीहरुलाई अभिलम्व राहतको व्यवस्था गर्न म सरकारसँग पुनः आग्रह गर्दछु ।’